Daacish oo soo buux dhaafisay duleedka Qandala – Hornafrik Media Network
Wararka ka imaanaya degaannada ku teedsan buuraleyda degmada Qandala ee gobolka Bari, ayaa sheegaya in halkaasi ay dhaqdhaqaaqyo cusub ka wadaan kooxda Daacish ee ku sugan buuraleyda ku dhaw Qandala.
Ilo’ wareedyo kala duwan, ayaa ku warramaya in Daacish aad u hubaysan saacadihii la soo dhaafay lagu arkay tuulooyin hoos tagta degmada Qandala ee gobolka Bari, kuwaasi oo ka soo baxay dhulka buuraleyda ah.
Dhaqdhaqaaqa ay Daacish bilowday ayaa ku soo beegmaya, xilli wefdi ka socda Puntland uu ku suganyahay degmada Qandala, kuwaas oo halkaas ka daah-furay mashruuca layrarka Cadceeda ku shaqeeya oo laga hir galiyey magaaladaas.
Daacish ayaa horay mar u qabsatay degmada Qandala 26-kii October 2016-kii, balse ciidamada Puntland ayaa Daacish dib ugala wareegay degmadaasi Qandala 7-dii December 2016-kii.
Wixii intaas ka dambeeyay ururkan ayaa si dhuumaalaysi ah uga hawl gelayay buuraleyda Qandala, sidoo kalena waxay dilal qorshaysan ka fuliyeen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, sanadihii u bambeeyey.
Dilkii ugu dambeeyay ee Daacish sheegatay ayaa magaalada Boosaaso loogu geystay 21-kii bishan January 2020, guddoomiyihii hore ee degmada Qandala Allaha u naxariistee Jaamac Maxamed Khuurshe.
Cudurro kala duwan oo ka dilaacay Badhaadhe iyo caruur u dhimatay
Taariikhdii cayaareed ee Kobe Bryant